कृषि – Page 10 – Halkaro
नेपाल बर्डफ्लू मुक्त देश !
काठमाडौ । सरकारले नेपाल बर्डफ्लु मुक्त मुलुक भएको घोषणा गरेको छ। पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नेपाल बर्डफ्लु संक्रमण मुक्त भएको दाबी गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीले बर्डफ्लुको संक्रमणबाट मुलुक मुक्त भएकाले ढुक्कसाथ कुखुराको मासु सेवन गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले भने, ‘बर्डफ्लुको संक्रमणबाट मुलुक पूर्णरूपमा मुक्त भइसक्यो । अब कुखुराको […]
अर्गानिक खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन
प्रकाशित मिति : २०७४, २५ जेष्ठ बिहीबार
चितवन । बिषादिको बढ्दो प्रयोगबाट बातावरणमा परेको असर न्युनिकरणका लागि भरतपुर महानगरपालिकाले अर्गानिक खेति प्रबद्र्धनमा जोड दिएको छ । फोहोर व्यवस्थापन संगै विषादी न्युनिकरणका लागि अर्गानिक खेति प्रबद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा भरतपुर महानगरपालिकाले विभिन्न सरसफाइ, बृक्षारोपण तथा सचेतनाका कार्यक्रमहरु गरि रहेको छ । बुधबार पश्चिम चितवनको भरतपुर […]
चितवनमा मत्स्य गाउँको विकासका लागि अनुदान
प्रकाशित मिति : २०७४, १९ जेष्ठ शुक्रबार
चितवन । मत्स्य पालनको राम्रो सम्भावना बोकेको चितवनमा सरकारले माछा पोखरीको लागि चालु आर्थिक वर्षमा २० हेक्टर जमिनमा अनुदान रकम दिएको छ । मत्स्य गाँउको रुपमा बिकास गर्न चितवन जिल्लाका बिभिन्न क्षेत्रमा माछा पोखरी निर्माण गर्न सरकारले अनुदान रकम दिदै आएको हो । चितवनमा २०७२÷०७३को आर्थीक बर्षको अन्त्य सम्ममा मत्स्य पालनका लागि ८ सय ६० […]
लागत मूल्य नपाउँदा दुग्ध उत्पादक किसान मर्कामा
प्रकाशित मिति : २०७४, १८ जेष्ठ बिहीबार
चितवन । लागत मूल्य पाउन नसकेपछि यहाँका दुग्ध उत्पादक किसान निराश बनेका छन् ।लागत अनुसारको बजार मूल्य नपाएपछि यहाँका कतिपय किसान विस्थापित भएका छन् भने केहीले लगानी घटाउँदै गएका छन् । पशुलाई खुवाउने दाना, चोकर, ढुटो, पराल, घाँसको मूल्य बढ्दै जाँदा दूधको मूल्यमा लागतअनुसार वृद्धि हुन नसकेको किसानहरुको गुनासो रहेको छ । सरकारी अनुदान नाम […]
गाँउपालिका प्रमुखको पहिलो निर्णयः जमिन बाँझो राख्नेलार्इ कारवाही
काठमाडौँ । कास्कीको मादी गाउँपालिकाले जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । नवनिर्वाचित अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङ, उपाध्यक्ष विष्णुमाया पौडेलसहित वडाध्यक्षहरुको पहिलो बैठकले मंगलबार यस्तो निर्णय गरेको हो । ‘गाउँमा कृषि क्रान्ति गर्नुपर्छ, जमिन बाँझो राख्नु हुँदैन भनेर यस्तो निर्णय गरेका हौं,’ अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङले भने । सिँचाइ सुविधा पुगेका जमिन बाँझो राखे दण्ड […]
पशुलार्इ ८ घण्टा बढी काममा लगाउन नपाइनेः अरू के गर्न पाँइदैन् ?
काठमाडौँ । पशुलाई मानिसले आफूखुसी जति समय पनि काममा लगाउने प्रवृत्तिलाई सरकारले बन्देज लगाउने कानुन ल्याएको छ । पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पशु कल्याण निर्देशिका, ०७३ जारी गर्दै पशुलाई अधिकतम ८ घन्टा मात्रै काममा लगाउन पाइने प्रावधान ल्याएको हो । त्यति मात्र होइन, वृद्धावस्थामा पुगेको पशुलाई कामबाट निवृत्त गरी पशुधनीले उचित हेरचाह गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत निर्देशिकामा समेटिएको […]
अनुदानको घार र गोला नै गुणस्तरहीभ भएपछि……
चितवन । मौरी विकास कार्यालय भण्डाराले अनुदानमा वितरण गर्ने मौरीको घार र गोला गुणस्तरहिन भएको भन्दै सुनसरीका मौरी पालक कृषकहरुले पत्रकार सम्मेलन नै गरि गुनासो गरेका छन् । ५० प्रतिशत सरकारी अनुदानमा प्राप्त गर्ने मौरीको १ हजार गोला र धार मध्य सुनसरी जिल्लाका किसानहरुलाई बैशाख २६ गते प्रान गर्ने भनि बोलाउदाँ धार र गोला गुणस्तरीय […]
पशुपालक जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान
चितवन । जिल्ला पशु सेवा कार्यालय चितवनले निरन्तर पशुपालन व्यवसायमा संलग्न जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरेको छ । शुक्रबार एक विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी पशु सेवा प्रसार (निक्षेपित) कार्यक्रम मार्फत नगद तथा दोसल्ला सहित सम्मान गरिएको छ । पशु सेवा कार्यालय अन्र्तगतका रहेका १४ वटा सेवा केन्द्रले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा निरन्तर पशुपालनमा सक्रिय जेष्ठ नागरिकलाई सम्मानका लागि […]
कृषिमा मनपरितन्त्र कार्यविधि मिच्दै विदेश शयरमा कर्मचारी
काठमाडौँ । कृषि विकास मन्त्रालयका कर्मचारी अन्तर्राष्ट्रि गैरसरकारी संस्था –आइएनजिओ) को खर्चमा विदेश भ्रमण गर्ने क्रम बढेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७३–७४ को चैत मसान्तसम्म ९५ पटक गरी ३ सय २८ कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गइसकेका छन् । यस अवधिमा २१ भन्दा बढी देशमा कृषिका कर्मचारी पुगेका छन् । अाजको नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार कृषिका […]
किसानको अनुदानमा सरकारी कर्मचारीको रजार्इँ
प्रकाशित मिति : २०७४, ४ बैशाख सोमबार
काठमाडौँ । सरकारले साना किसानलाई लक्षित गरी धादिङका ग्रामीण कखुरा प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि दिएको अनुदान रकममा सरकारी कर्मचारीले रजाइँ गरिरहेको खुलासा भएको छ । अाजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अनुसार जिल्ला पशुसेवा कार्यालय धादिङको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक कार्यक्रमअनुसार अन्डामा आत्मनिर्भर र पारिवारिक पोषण सुरक्षाका लागि ग्रामीण कुखुरा प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत धादिङका १० वटा किसान समूहका […]